Ahoana ny fanomanana tanjona kendrena
Ny tanjona kendrena dia manondro loharanom-pahalalana izay ampidinina ary apetraka amin'ny vatan'ny magnetron sputtering, plating ion multi-arc na karazana fitaovana hafa mifono arakaraka ny fepetra ilaina mba hamoronana sarimihetsika manify isan-karazany. Ny tanjona kendrena dia be mpampiasa amin'ny sehatra maro toy ny haingon-trano, fitaovana, vera, fitaovana elektronika, semiconductors, firaketana andriamby, fisehoana fisaka, sela masoandro, sns. Ny fitaovana kendrena takiana amin'ny sehatra samihafa dia samy hafa.
Fanomanana ny tanjona kendrena
Ny fanomanana ireo fitaovana kendrena hampidina dia azo zaraina ho sokajy roa: fanariana metaly sy metalyurgie vovoka arakaraka ny fizotrany. Ho fanampin'ny fifehezana hentitra ny fahadiovana, hakitroky, haben'ny voam-bary sy fironana kristaly amin'ny fitaovana, ny fepetra fitsaboana hafanana sy ny fomba fanodinana manaraka dia mila fehezina mafy koa. fanaraha-maso.
1. Metallurgy vovoka
Rehefa manomana lasibatra amin'ny metallurgy vovoka, ny lakile dia ao: (1) mifantina vovoka madio sy avo lenta indrindra ho toy ny akora; (2) misafidy teknolojia mamorona sy manova izay afaka mahatratra ny fanamafisam-peo haingana mba hahazoana antoka fa kely ny poriazin'ny tanjona kendrena sy hifehezana ny haben'ny voany; (3) Ny fizotran'ny fanomanana dia mifehy tanteraka ny fampidirana ireo singa maloto.
2. Fomba fanariana mitsonika
Ny fomba fanariana fanalefahana dia iray amin'ireo fomba fototra fanaovana tanjona kendrena., ny fandrendrehana sy ny fanariana azy dia mazàna atao ao anaty banga na atmosfera miaro, mandritra ny fizotran'ny fanariana, Tsy azo ihodivirana ny fisian'ny poria sasany ao anaty ny firafitry ny fitaovana. Ireo pores ireo dia hiteraka fiparitahan'ny poti mandritra ny fizotran'ny sputtering, amin'izany dia misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny sarimihetsika mihetsiketsika.. Noho izany antony izany, ny fanaraha-maso ny fanodinana ny hafanana ary ny fizotran'ny fitsaboana hafanana dia takiana mba hampihenana ny porosity.
Précédent: Ny fampiasana lasibatra amin'ny electroplating vacuum
Manaraka: Tanjona ampiasaina amin'ny famonoana vokatra elektronika